Jarmalka oo dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinayaa ammaanka Soomaaliya – Balcad.com Teyteyleey
Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi C/laahi oo lagu casuumay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 27 ee ka soo wareegatay midowgii labada Jarmal ee bari iyo galbeed ayaa hambalyo u direy dowladda iyo shacabka Jarmalka, isagoo ka codsaday in labo laabaan taageeradooda Soomaaliya.
Danjiraha dowlada federaalka Jarmalka ee Soomaaliya JUTTA FRASCH oo ka hadlaysay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 27 ee ka soo wareegatay midowgii labada Jarmal ee bari iyo galbeed oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayaa sheegtay in Jarmalku uu labada sano ee soo socota ugu deeqay Soomaaliya lacag ka badan USD 122 Milyan, taas oo lagu bixin doono kobcinta dhaqaalaha dalka, ka soo kabashada abaaraha iyo shaqo abuurka dhalinyarada.
JUTTA FRASCH, ayaa xustay in arintan qeybka tahay heshiiskii taariikhiga ahaa ee labada dowladood ku kala saxiixdeen magaalada Berlin ee dalkaasi.
Danjire, JUTTA FRASCH ayaa sidoo kale sheegtay in 95.5 Milyan oo Euro ku bixiyeen dadkii abaaraha saameeyeen ee dalka, iyadoo tilmaantay in safarkii uu Soomaaliya ku yimid wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Gabriel Sigma oo ahaa calaamad muujinaysa xiriirka Berlin iyo Muqdisho isla markaana uu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dalkaas oo Soomaaliya yimaada ebad.
JUTTA FRASCH, ayaa sheegtay in Soomaaliya sidoo kale ka caawin doonaan arimaha nabad geliyada, hanaanka federaalka iyo hagaajinta maamulka dowliga ah….
Munaasabdda ayaa sidoo kale waxaa ka qeybgalay guddoomiyaha gobolka Banaadir, xeer ilaaliyaha qaranka, danjiriyaal iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda. iyadoo JUTTA FRASCH khudbadii halkaas ka jeedisay sidoo kala kaga hadashay ahmiyadda ay leedahay in dadka Soomaaliyeed ka tashtaan aayahooda isla markaana khilaafaadka dhinac iska dhigaan.
The post Jarmalka oo dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinayaa ammaanka Soomaaliya appeared first on Ilwareed Online.